Umkhiqizi we-Casement Best Window neFektri | AmaMede
I-MEDO inikeza amasistimu ewindi amaningi e-aluminium casement, kufaka phakathi: iwindi le-cassi le-outsiwng, iwindi le-awning, iwindi lokutshekisa / i-hopper, ukufaka iwindi le-casement, ukugoba nokujika iwindi, iwindi elingaguquki, iwindi lesithombe, iwindi elenga uhlangothi, iwindi lekhethini lodonga njll.
Zombili izinhlobo zemanuwali nezimoto ziyatholakala. Insimbi engagqwali impukane anezikhala futhi ecashile fly anezikhala ayatholakala ukuhlangabezana nezidingo amaklayenti ahlukahlukene. Okungaphezulu, i-MEDO inikela ngemiklamo ehlukile yamawindi ukuze ikwehlukanise nabanye, ngokwesibonelo, iwindi le-casement lokufaka kabili, i-3 ewindini elilodwa, iwindi elikhulu elihambisanayo njll.
Indlela evulekile yewindi
Indlela evulekile yomnyango
• Ukuzinza okuphezulu • Ukusebenza kahle okuphezulu • Ukungaguquguquki okuphezulu • I-Stock ephansi • I-Extra Value Barrier-Free Access • Izindleko Zokulungisa Eziphansi • Ukuqina Okuthuthukile
Break Thermal, multi-umgodi design, amanzi efihlekile
Ukufakwa okushisayo okuhle kakhulu ngephrofayili yekhefu elishisayo, umugqa omkhulu wekhefu lokushisa okushisayo, nengilazi evulekile engafakwanga. Isitoko esiphansi esingenayo ingcindezi yokuhamba kwemali enamaphrofayli ahlukahlukene kakhulu. Uhla lomkhiqizo onhlobonhlobo lwenza zonke izindawo nezimo ukuthola imikhiqizo yalo efanelekile ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene ngesitayela nokusebenza. Izinto ezintsha ezinjengewindi lomnyango newindi lokufaka kabili njll zingadlula ukulindela kwakho ukuhlangabezana nesidingo sakho ongeke usibone, futhi ngaleyo ndlela uhole ukuthambekela kwemakethe.
ubuchwepheshe be-lnjection, ukusebenza okuphezulu kokubekwa uphawu
Umjovo weglue wekhoneni lekhoneni
Ukuqina komoya okuphezulu
Ukuqina kwamanzi okuphezulu
Uchungechunge oluphelele lusebenzisa inqubo yenaliti yeglue ukufeza amandla aphezulu ahlangene. Izesekeli zokuvala uphawu ezihlangene eziningi kanye namapayipi afihliwe kuthuthukise kakhulu ukuqina kwamanzi. Ngaphezu kwalokho, ama-gaskets e-premium EPDM athuthukise ukuqina komoya nokuqina kwamanzi.
Umvikeli wekhona lobuciko, iflnetnet yensimbi engagqwali ephezulu eguquguqukayo
Umvikeli wekhona lobuciko
Uzimele ongaphansi ongavinjelwe womnyango we-Casement unikeza ukufinyelela okungavinjelwe. Insimbi engagqwali i-flynet ne-flymesh efihliwe kakhulu iyatholakala ukuze ihlangabezane nezidingo ezihlukile ekusebenzeni kwe-fly mesh nangokubheka. Isivikeli sekhoneni lokudala lewindi lokungenisa asinikezi kuphela ukwakheka okuhle kepha futhi nokuphepha okwengeziwe ukugwema ekhoneni elibukhali.
Iphrofayli enemibala emibili, okusho ukuthi iphrofayili yangaphakathi nephrofayili yangaphandle engenamibala, ingafana kahle nokwakheka kwangaphakathi nombono wangaphandle wokwakha. Iphoyinti lokuvikela ukumelana nezikebhe nomgcini linikeza ukwanda ngokweqile futhi lithuthukise ukusebenza komthwalo womoya wokuvimbela ukuqina komoya nokuqina kwamanzi. inikeza isipiliyoni sokunethezeka sokuphila ngokubukeka okuncane, imigqa ebushelelezi nokusebenza okuthulile.Abasebenzisi bangaqiniseka ngokuphepha kwewindow noma ngaphansi kwesimo sezulu esibi ngokweqile ngedivayisi ephephile ehlulekayo.
Iwindi lokukhipha i-MDPC100A
MDPC100A110 Ifasitela Lokukhipha
(iqondaniswe nebhande lendawo + uthango lokuvikela olungasebenziseka)
I-MDPC100A120 iwindi lokukhipha iwindi
Idizayini enelungelo lobunikazi, i-mortise kanye ne-tenon tech, inyathele amanzi acashile
Idizayini enelungelo lobunikazi
I-Mortise ne-tenon tech
Umsele odonsekile ofihliwe
Ukufakwa okushisayo okuhle kakhulu ngephrofayili yekhefu elishisayo, umugqa omkhulu wekhefu lokushisa okushisayo, nengilazi evulekile engafakwanga. Idizayini yesakhiwo sangempela, ishaneli eyakhelwe ngaphakathi yamanzi, ukuqina kwamanzi okuthuthukisiwe. Ukuqina kwamanzi nokumelana nomoya kuyathuthukiswa yi-mortise ne-tenon mullion exhunywe. Ukufakwa uphawu kweMultistep okuyizingqimba ezintathu kanye nesakhiwo samanzi sokufihla sokuqina kwamanzi okungcono.
Ucingo lokuvikela oluvulekayo, ubuhlalu beglasi obuhlanganisiwe obungu-45 °
Uthango lokuphepha oluvulekayo
Ubuhlalu beglasi obuhlanganisiwe obungu-45 °
Uhlaka lokuguqulwa olungenawo umugqa luthuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza. Uthango lokuphepha oluvulekayo aluqinisekisi nje kuphela ukuphepha kodwa futhi lwenza ukubalekela kube lula uma kunesimo esiphuthumayo. I-sash ehambisanayo nozimele ngokuhlangana kwe-45 ° ekhoneni kunikeza umbono ococekile futhi omuhle.
Umvikeli wasekhoneni lobuciko, ubuchwepheshe bokujova i-Glue, ikholomu ekhoneni elisha
Ubuchwepheshe bokujova i-glue
Ikholomu lekhoneni elisha
Kusetshenziswa ama-gaskets e-EPDM ahlanganisiwe ukwenza ngcono ukuqina komoya nokuqina kwamanzi. Umvikeli wekhoneni lobuciko wewindi lokufaka uhlinzeka hhayi kuphela ngomklamo omuhle kepha futhi nangaphezulu ukuphepha ukugwema ekhoneni elibukhali. Uchungechunge oluphelele lusebenzisa inqubo yenaliti yeglue ukufeza amandla aphezulu ahlangene. Ukuqamba kwekholomu ekhoneni okusha kwenza ukuhlangana kwekhoneni kuphephe futhi kube kuhle.
Iphrofayili enemibala emibili, okusho ukuthi iphrofayili yangaphakathi nephrofayili yangaphandle ngemibala ehlukene, ingafana kahle nokwakheka kwangaphakathi nombono wesakhiwo sangaphandle. Iphoyinti lokumelana nophahla nomgcini unikeza ukuphepha okwengeziwe futhi kuthuthukise ukusebenza kokumelana nomthwalo womoya ukuze kube nokuqina komoya okungcono nokuqina kwamanzi. Isibambo esingenasisekelo sinikeza isipiliyoni sokunethezeka sokuphila ngokubukeka okuncane, ulayini obushelelezi wokusebenza, nokusebenza ngokuthula. Abasebenzisi bangaqiniseka ngokuphepha kwewindi noma ngaphansi kwesimo sezulu esibi ngokwedlulele ngedivayisi ephephile. Ihenjisi eliqinisiwe elinamalunga aqinisiwe lenza amawindi azinze, aqine futhi aphephe.
Ifaka iwindi + Ifaka i-flynet
Ifasitela elingaphandle + Lokufaka i-flynet
Ukufakwa okushisayo okuhle kakhulu ngephrofayili yekhefu elishisayo, umugqa omkhulu wekhefu elinama-multi-cavitythermal, kanye nengilazi eshisayo engafakwanga. Idizayini yesakhiwo sangempela, ishaneli eyakhelwe ngaphakathi yamanzi, ukuqina kwamanzi okuthuthukisiwe. Ukuqina kwamanzi nokumelana nomoya kuyathuthukiswa yi-mortise ne-tenon mullion exhunywe. Ukufakwa uphawu kweMultistep okuyizingqimba ezintathu kanye nesakhiwo samanzi sokufihla sokuqina kwamanzi okungcono.
Ucingo lokuphepha oluvulekayo, ubuhlalu bezingilazi ezihlanganisiwe ezingama-45 °
Kusetshenziswa ama-gaskets e-EPDM ahlanganisiwe ukwenza ngcono ukuqina komoya nokuqina kwamanzi. Umvikeli wekhoneni lobuciko wewindi lokufaka uhlinzeka hhayi kuphela ngomklamo omuhle kepha futhi nangaphezulu ukuphepha ukugwema ekhoneni elibukhali. Uchungechunge olugcwele lusebenza ukufaka umjovo weglue ekhoneni ukuze kuzuzwe amandla aphezulu ahlangene. Ukuqamba kwekholomu ekhoneni okusha kwenza ukuhlangana kwekhoneni kuphephe futhi kube kuhle.
Iphrofayili enemibala emibili, okusho ukuthi iphrofayili yangaphakathi nephrofayili engaphandle ngemibala ehlukene, ingafana kahle nokwakheka kwangaphakathi nombono wesakhiwo sangaphandle. Iphoyinti lokumelana nophahla nomgcini unikeza ukuphepha okwengeziwe futhi kuthuthukise ukusebenza kokumelana nomthwalo womoya ukuze kube nokuqina komoya okungcono nokuqina kwamanzi. Isibambo esingenasisekelo sinikeza isipiliyoni sokunethezeka sokuphila ngokubukeka okuncane, ulayini obushelelezi wokusebenza, nokusebenza ngokuthula. Abasebenzisi bangaqiniseka ngokuphepha kwewindi ngisho nasesimweni sezulu esibi ngokweqile ngedivayisi ephephile ehlulekayo. Ihenjisi eliqinisiwe elinamalunga aqinisiwe lenza amawindi azinze, aqine futhi aphephe.
I-MDPC120A iwindi lokufaka kabili
Ukubukeka okumangazayo umbono wokuqala okukunikezayo! Idizayini yokwakheka ehlukile futhi enelungelo lobunikazi, ukuvulwa kokufakwa kabili, i-flynet efihliwe, ifreyimu ehambisanayo kanye ne-sash, ulimi lwedizayini encane, inyathele ukubekwa uphawu okuningi, ipayipi elifihliwe, indlela yokuvula enelungelo lobunikazi ...... Ngaphandle kwalokhu, uzokugcina.
isakhiwo lnnovative and design, usayizi omkhulu, 5 seal
Ukufakwa okushisayo okuhle kakhulu ngephrofayili yekhefu elishisayo, umugqa omkhulu wekhefu lokushisa okushisayo, nengilazi evulekile engafakwanga. Isakhiwo sobuhle be-mullion nengilazi esenziwe ngobungcweti esihlanganiswe ne-sash ehambisanayo nohlaka kunikeza umbono omncane olinganiselayo ngemigqa yokwakha ebushelelezi. Izimpawu ezingama-5 ezinama-gaskets we-EPDM we-premium ahlanganisiwe ikakhulukazi athuthukise ukuqina kwamanzi nokuqina komoya.
I-beaddrainage edidiyelwe ingilazi ehlanganisiwe engu-45 °, amanzi afihliwe
I-sash ehambisanayo nozimele ngokuhlangana kwe-45 ° ekhoneni kunikeza umbono ococekile futhi omuhle. Mullion ngobuningi ngokuhlanganyela uphawu izesekeli futhi kufihlwe.
Ukuvulwa kwangaphakathi kabili, ubuchwepheshe bezintambo ezifihliwe, umlandeli wezintambo otholakalayo
Ukuvulwa kwangaphakathi kabili
Indlela yokuvula kabili yokuncoma inconyelwa kakhulu ukwakhiwa okuphezulu kokusebenza okuphephile nokuhlanzwa. I-fly mesh efihliwe inikeza ukubukeka okumangazayo nokukhanya kwemvelo okuhle kakhulu.
Umlandeli wentambo ongasuswa
Iphoyinti lokumelana nophahla nomgcini unikeza ukuphepha okwengeziwe futhi kuthuthukise ukusebenza kokumelana nomthwalo womoya ukuze kube nokuqina komoya okungcono nokuqina kwamanzi. Isibambo esingenasisekelo sinikeza isipiliyoni sokunethezeka sokuphila ngokubukeka okuncane, ulayini obushelelezi wokusebenza, nokusebenza ngokuthula.
- Iwaranti yeminyaka eyi-10 yehadiwe, okuyi izinga eliphakeme kakhulu embonini.
- Ihadiwe lomkhiqizo weMedo, uphawu lwaseJalimane i-hardware ne-US brand hardware yilezi iyatholakala.
- Izitayela ezahlukahlukene zokubamba ziyatholakala.
- Isibambo esingenasisekelo sinikeza ukubukeka okuncane.
- Insizakalo yokwenza ngokwezifiso iyamukelwa.
Uhlelo lokuvala uhlelo oluphezulu lwaseBulgaria
- Strick umjikelezo test
I-AlI i-Hardware yethu isidlulile ukuhlolwa okuqinile komjikelezo okuphindwe kaningi kunezinga lezimboni.
- Unqiue uvala uhlelo
I-Unqiue yokukhiya ihlinzeka ngokuphepha okwengeziwe.
- ukwelashwa komhlaba okuyinkimbinkimbi
Ngokulashwa komhlaba okuyinkimbinkimbi, ngisho nokuhlanganiswa kwangaphakathi kubonisa okuhle kakhulu ekubukeni nasekulweni nokugqwala.
Ikhona elivikelwe lokuphepha kwezingane
Idizayini yesistimu enelungelo lobunikazi
Yamukela ama-35.3mm ama-multi-cavity heat insulation umucu, 27A elingenalutho futhi kabili 12A ingilazi eziyize ukumiswa, okungahlangabezana nokushisa ukwahlukanisa ukusebenza endaweni ebandayo kakhulu ngenkathi kuqinisekiswa ukukhishwa kwemisindo ephezulu ukusebenza kwe-36db.
Ukusetshenziswa kwezimpawu zezimpawu zemigudu eminingi futhi isakhiwo sokudonsa amanzi esifihliwe siqinisekisa ukusebenza kahle komkhiqizo.
Amawindi nezicabha zeMEDO - Isimo Sengqondo Sasekhaya Esisha
Izinhlelo ze-MEDO nikeza ukubuka okunwetshiwe ngozimele abancane nengilazi enkulu
Ukusebenza okuhle kakhulu okutholwe ngokuhlanganiswa okuqondile kwezingilazi, amaphrofayili, i-hardware kanye nama-gaskets angakunika indawo yokuhlala ephephile nenethezekile
Olandelayo: Uhlelo lwe-Bi Folding